Eritrea OO Diidey Gargaarkii shiinaha ee COVID19 – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Eritrea OO Diidey Gargaarkii shiinaha ee COVID19
Waad ku mahadsan tihiin, Cargo itoobiyaan ah adeegga bilaashka ah ee afrikaanka EP:
Waan qaddarinaynaa. 06 Apr 2020 – (EP) Qalabkii caafimaad ee ugu horreeyay oo laga keenay Shiinaha ayaa loo duuliyay dal kasta oo Afrikaan ah si bilaash ah duullimaadyadii xamuulka ee Itoobiya toddobaad gudihiis ah si looga caawiyo dagaalka ka dhanka ah COVID-19.
Shiinuhu wuxuu sameeyay Qalabka Ilaalinta Shaqsiyadeed (PPE) iyo xirmooyin kale oo mid walba oo ka mid ah 53-kii ka mid ah 54-ka dal ee Afrikaanka ah uu helayaa 20,000 oo xirmooyin tijaabooyin ah, 100,000 oo maaskaro ah, iyo 1,000 oo ku habboon qalabka difaaca iyo gaashaanka wejiga. Ereteriya way diidey gargaarka maxaa yeelay ‘tayada’ waji-xidhka.
Hadiyadaha kale ee bilaashka ah ee la siinayo 54-ka waddan ee ku yaal qaaradda Afrika, lagana yaabo in Eritrea ay ku deeqdo waxaa ku jira hawo farsamo oo aad loogu baahan yahay, ay ku soo socdaan.
Qalabkan ayaa waxaa ka mid ah 500 oo dabeysha, 200,000 suits iyo gaashaammo wajiga, 2000 heerkulbeegyo, 1million swift iyo xirmooyinka xirmooyinka iyo 500,000 galoofis. Mar labaad, xamuullada Ethiopian Airlines ayaa sahayda gaarsiin doona dhammaan waddamada Afrika lacag la’aan.
iyagoo u mahadceliyey diyaarada itoobiyan